Dulmarka Shirkada - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa Dhismaha 38, Jinguo park park, No. 500 wadada Zhenkang, degmada Jinshan, Shanghai, waxaan haynaa in ka badan 15 sano oo khibrad xirfadeed ah oo CNC ah oo ku taal Shanghai, inta badan mashiinka CNC, CNC. leexashada, Mashiinka mashiinka rogista, Mashiinka CNC, 4/5 dhidibka mashiinka CNC, Mashiinka dusha sare, Goynta Laser, Alxanka biraha alxanka iyo wixii la mid ah. Shirkaddayadu waxay ka kooban tahay aag 1,200 mitir murabac ah, tirada shaqaaluhu waa qiyaastii 30, 10 maareeyayaal farsamo, 5 kormeerayaal tayo leh. Qalabka wax soo saarka ugu muhiimsan in ka badan 30 nooc.
1. Waxyaabaha caanka ah ee mashiinada CNC
Waxaa muhiim ah in la ogaado halkaan in qalabka makiinadaha CNC inta badan la heli karo oo wata qalabka wax lagu beddelo oo otomaatig ah oo barnaamijka lagu xakameeyo. Sidaa awgeed, way iska caddahay in hawsha hawlgalku ay ku urursan tahay dabeecadda. Dhammaan mashiinnada CNC, nidaam wax lagu cabiro oo elektiroonig ah ayaa looga shaqeeyaa dhidib kasta oo la kontoroolo. Nidaamyada cabbiraadda waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada CXNC si loo aqoonsado meelaynta slide ee afaafka hore.
Nidaamyadan ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara jihaynta miiska dunmiiqa iyo cabirka xawaaraha dunmiiqa dhabta ah. Kontaroolada CNC waa qaybaha ugu muhiimsan ee ka shaqeynta mashiinka CNC. Kontaroolada cusub ee loo yaqaan 'CNC kontaroolada' waxaa loo sameeyay codsiyo fudud oo laxiriira leexashada xarumaha makiinadaha iyo wax shiida. Dhinaca kale, kumbuyuutarrada kumbuyuutareed ee horumarsan ayaa u oggolaanaya xakamaynta saxda ah ee faasaska kala duwan, iyaga oo awood u siinaya inay si dhakhso leh u dhexgalaan boosaska. Haddaba bal aan jaleecno qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee ka shaqeynta makiinadda CNC.
2. Nidaamyada saliidaynta otomaatigga ah
Waxaa xusid mudan in halkan laga sheego inaad kaheli karto isku halaynta muddada dheer qalabka mashiinka kaasoo ku tiirsan jadwalka dayactirka iyo saliidaynta joogtada ah. Waa xaqiiqo caadi ah oo la arkay in saliid aan ku filneyn mashiinnada ay sababi karto waxyeelo dhicis ah iyaga. Intaa waxaa sii dheer, soo saarid aan ku filnayn ayaa sidoo kale dhaawici kara biraha wadada. Si kale haddii loo dhigo, haddii ay jirto la'aanta gebi ahaanba saliidaynta, xasilloonida mashiinku wuu yaraan lahaa.
Badanaa, hagaajinta kharashyada laxiriira mashiinada CNC aad ayey qaali u yihiin. Marka, macno ayey leedahay in la doorto mashiinnada CNC kuwaas oo ku qalabaysan farsamo is-saliidayn ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaan saliidayn otomaatig ah, halkaasoo qalab kasta oo qalabku ku xiran yahay iskuxidhka dhexe. Mashiinka saliida sifeeya wuxuu si otomaatig ah u siiyaa quudinta saliidda barnaamij ahaan iyo cadaadis lagu saari karo.
3. Transitivity ee habka ka shaqaynta CNC ayaa ka fiican
Ka dib markii la khaldo oo la hubiyo habka jarista tijaabada, kalsoonida mashiinnada CNC ayaa loo diri karaa si loo badbaadiyo waqtiga muhiimka ah loona hubiyo tayada isla waqtigaas. Intaa waxaa sii dheer, hawsha waxaa loo isticmaali karaa tusaale ahaan howlaha soo socda ee qaybaha kale ee la midka ah. Sidaa awgeed, iyadoo la adeegsanayo astaamaha ku-meel-gaadhka ah ee mashiinnada CNC, qulqulka shaqooyinka kala duwan ee ka socda guud ahaan warshadaha waa la hagaajin karaa.
4. Fursadaha Spindle ee mashiinada CNC
Labada mashiin ee 3-dhidibka iyo 5-dhidibka ah ee CNC waxay leeyihiin fursado kala duwan oo la dheereeyay markii macnaha guud uu ku saabsan yahay dunmiiqa. Mashiinnada 'HSD' iyo 'Perske spindles' ayaa durba wax weyn ku dhuftay aagga mashiinada CNC. Waxay yihiin kuwo karti leh waxayna qaadi karaan culeysyo iyagoo damaanad qaadaya sax ahaantaada isla waqtigaas. Intaa waxaa dheer, bambooyin faaruq ah ayaa ah ikhtiyaar ikhtiyaari u ah mashiinnada CNC. Mashiinnada faakiyuhu waxay ka dhigayaan xoog iyo xasillooni qalabaynta mashiinnada CNC.
5. Qalabeeyayaasha dhererka qalabka otomaatiga ah
Qalabeeyayaasha dhererka qalabka otomaatigga ah waxay ka dhigi karaan mashiinnada 3-dhidibka iyo 5-dhidibka CNC waxtar badan. Nidaamyada cabbiraadda dhererku aad bay sax u yihiin. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka kooban yihiin hal M-Code oo fuliya xulashada qalabka aaladda otomaatiga ah. Intaas waxaa sii dheer, meeleynta aaladda baaritaanka booska cabbiraadda si wanaagsan ayaa loo hagaajin karaa iyadoo la kaashanayo qalab dejiyaha dhererka qalabka otomaatiga ah. Marka baaritaanka la ogaado mashiinka, dhererka qalabka shaqsiyan loo cabiray si toos ah ayaa loogu keydiyaa miiska miisaanka qalabka Fagor.
6. Xakamaynta Fagor
Xakamaynta Fagor sidoo kale waa qayb ka mid ah 3-dhidibka iyo mashiinnada CNC 5-dhidibka ah. In kasta oo inta badan mashiinnada CNC ay ku qalabaysan yihiin shaqadan, soosaarayaasha kale kuma sii dheereeyaan mashiinnada CNC. Haddii ay dhacdo in mashiinkaaga CNC uusan lahayn Fagor Controls, way fiicnaan laheyd inaad ka iibsato alaab-qeybiyaha saddexaad.
7. Waa lagama maarmaan in la wado tijaabooyin hore ka hor inta aan laga bilaabin habka wax soo saarka
Si sax loo noqdo, jawiga waqtiga shaqada ee mashiinada CNC waa mid otomaatig ah. Tani waa sababta uu qofku ugu baahan yahay inuu fiiro gaar ah u yeesho amniga iyo tayada. Si kale haddii loo dhigo, hababka makiinadaha ee la xiriira CNC waa inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha hawlgalka iyo soo saarista ee tijaabada tijaabada ah. Tijaabooyinka tijaabada ka hor intaan si dhab ah looga bilaabin habka wax soo saarka ayaa kaa badbaadin doona dhibaatooyin badan.
1. Ouzhan wuxuu leeyahay in kabadan 30 nooc oo mashiinno CNC ah oo horumarsan, badankoodna waxaa laga keenaa Switzerland iyo Japan, saxnaanteennu waxay gaari kartaa 0.01mm.
2. Ouzhan hadda waxaa ka shaqeeya in ka badan 30 shaqaale halka in ka badan 10% ay haystaan ​​shahaadada Masterka ama Doctor. Toban injineeradeena dhamaantood waxay ka qalin jebiyeen jaamacadaha ugu sareeya Shiinaha ee ku takhasusay mashiinada waxayna leeyihiin aqoon xirfadeed qani ku ah shaqaalaheena ajaanibta ah waa aqoonyahano caalami ah oo ka qalin jabiyay xirfado ganacsi, kuna xeel dheer hanaanka ganacsiga ajaanibta. .
3. Ouzhan waxay leedahay warshad farsameedka CNC u gaar ah, tan iyo markii warshadeena laga aasaasay magaalada Shanghai sanadkii 2005, waxaan u adeegsanay tobaneeyo sano oo khibrad iyo aqoon hodan ah aan ku leenahay mashiinka CNC si aan ugu guuleysano aqoonsiga macaamiil badan. Sida Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco iyo wixii la mid ah.